ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ? - For her Myanmar
ယောင်းတို့ရေ.. ဆံပင်တွေကို ဖြောင့်လိုက် ကောက်လိုက် ဆေးဆိုးလိုက်နဲ့ အမျိုးမျိုးခြယ်လှယ်မိတာကြောင့် ခြောက်သွေ့ပျက်စီးတဲ့ ဆံကေသာ အဖတ်တင်ကျန်ရစ်နေပြီလား.. ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးက ယောင်းအတွက်ပါပဲ။ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ မင်မင်က ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အထိရောက်ဆုံး၊ အသင့်တော်ဆုံး ဆီကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာ မျှဝေပေးပါ့မယ်။ တကယ်တော့ ရွေးချယ်ရတာ လွယ်လွယ်လေးပါ ယောင်းတို့ရေ… ယောင်းတို့ ဆံသားအတွက် သုံးစွဲမယ့် ဆီထဲမှာ ဒီဓာတ်တွေ ပါနေဖို့ပဲ လိုတာပါ။
Catechins ဓာတ်က ဆံပင်ကျွတ်စေနိုင်တဲ့ Dihydrotestosterone (DTH) ကို လျှော့ချပေးတာကြောင့် ဆံပင်ကျွတ်တာကို သက်သာစေနိုင်သလို ဦးရေပြားခြောက်သွေ့တာနဲ့ ဗောက်ဖြစ်ပေါ်တာကိုလည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
Antioxidants ကတော့ ဆံပင်ကျန်းမာ သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် အထိရောက်ဆုံးအားဖြည့်ပေးနိုင်သလို ဆံပင်ကျွတ်တာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်အရှည်မြန်စေပါတယ်။
၃။ ဗီတာမင် A, B , C နဲ့ D
Vitamin A က ဆံသားအရှည်မြန်စေဖို့ အားဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး
Vitamin B ကတော့ ဆံပင်ကျွတ်တာကို ကုသပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာ အစွမ်းထက်ဆုံးပါပဲ။
Vitamin C ကတော့ ဆံပင်ပျက်စီးမှုတွေကို ဟန့်တားပေးနိုင်ပြီး ဆံပင်သန်စွမ်းစေဖို့ အရေးကြီးတဲ့ Collagen (ကော်လာဂျင်) လို့လူသိများတဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
Vitamin D ကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ ဆံသားတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ရမှာ ကြားခံအနေနဲ့ ဆံသားပျက်စီးမှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Enzymes ကတော့ ဦးရေပြားကို သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းစေပြီး ဆံပင်သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်တဲ့အပြင် ဆံသားကြွပ်ဆတ်ခြင်းကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ Amino acids
Amino acids ကတော့ ဆံပင်အရင်းကနေ အဖျားအထိ သန်စွမ်းစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်သန်စွမ်းပြီဆိုမှဖြင့် ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေနဲ့လည်း ဝေးပြီပေါ့..
ဒီဓာတ်တွေသာ စုံအောင်ပါမယ်ဆိုရင် ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားတွေအတွက် ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့… ဆံသားပျက်စီးတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ ဆံပင်ကြမ်းတမ်းခြင်းတွေ၊ မွဲခြောက်ခြင်းတွေ၊ ဆံသားကြွပ်ဆတ်ခြင်းတွေနဲ့ ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီလေ။
ဟုတ်ပြီ… ဓာတ်တွေကိုတော့ သိပြီ။ ဒီဓာတ်တွေ အကုန်ပါတဲ့ ဆီကို ဘယ်နားက သွားရှာရမလဲလို့လည်း ခေါင်းခဲမနေပါနဲ့။ ယောင်းတို့စဉ်းစားနေတဲ့ မေးခွန်းအတွက် မင်မင့်မှာ အဖြေရှိပါတယ်။ ဒီအဖြေကတော့ Green Tea Oil ပါ။ ယောင်းတို့ ဆံကေသာ ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်တဲ့ Green Tea အဆီကိုရော ဘယ်က ရနိုင်မှာလဲ၊ ဘယ်လို သုံးရမှာလဲ?
silk n shine no more damage
လွယ်လွယ်လေးပါ။ Silk-n Shine က ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ No More Damage HairCoat ဟာ Green Tea ရဲ့ အဆီအနှစ်တွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာမို့ ယောင်းတို့ရဲ့ ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေဖြစ်မှာပါ။ နေ့စဉ်သုံးလို့ရတဲ့ HairCoat လည်း ဖြစ်တာမို့ ထွေထွေထူးထူးလည်း အလုပ်ရှုပ်နေစရာ မလိုတော့ဘူးလေ…
ဒီ့ထက်ပိုပြီး ယောင်းတို့ရဲ့ ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အဖြေရှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်း မင်မင်တို့ For Her Myanmar က ကျင်းပမယ့် Her Beauty Her Choice ဆိုတဲ့ပွဲရဲ့ “Right Haircare For Your Hair” ဆိုတဲ့ Panel Discussion မှာ လာလေ့လာလို့ ရပါသေးတယ် ယောင်းတို့ရေ…
ကဲ.. ဒီတော့ ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဆီကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်ပြီး ဆံသားကို ပျက်စီးမှုတွေကနေ ဝေးဝေးပြေးနိုင်ကြပါစေနော်..
ယောငျးတို့ရေ.. ဆံပငျတှကေို ဖွောငျ့လိုကျ ကောကျလိုကျ ဆေးဆိုးလိုကျနဲ့ အမြိုးမြိုးခွယျလှယျမိတာကွောငျ့ ခွောကျသှပေ့ကျြစီးတဲ့ ဆံကသော အဖတျတငျကနျြရဈနပွေီလား.. ဒါဆိုရငျတော့ ဒီဆောငျးပါးက ယောငျးအတှကျပါပဲ။ ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ မငျမငျက ခွောကျသှပေ့ကျြစီးနတေဲ့ ဆံကသောအတှကျ အထိရောကျဆုံး၊ အသငျ့တျောဆုံး ဆီကို ဘယျလို ရှေးခယျြရမလဲဆိုတာ မြှဝပေေးပါ့မယျ။ တကယျတော့ ရှေးခယျြရတာ လှယျလှယျလေးပါ ယောငျးတို့ရေ… ယောငျးတို့ ဆံသားအတှကျ သုံးစှဲမယျ့ ဆီထဲမှာ ဒီဓာတျတှေ ပါနဖေို့ပဲ လိုတာပါ။
Catechins ဓာတျက ဆံပငျကြှတျစနေိုငျတဲ့ Dihydrotestosterone (DTH) ကို လြှော့ခပြေးတာကွောငျ့ ဆံပငျကြှတျတာကို သကျသာစနေိုငျသလို ဦးရပွေားခွောကျသှတေ့ာနဲ့ ဗောကျဖွဈပျေါတာကိုလညျး တားဆီးပေးနိုငျပါတယျ။
Antioxidants ကတော့ ဆံပငျကနျြးမာ သနျစှမျးစဖေို့အတှကျ အထိရောကျဆုံးအားဖွညျ့ပေးနိုငျသလို ဆံပငျကြှတျတာကိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပွီး ဆံပငျအရှညျမွနျစပေါတယျ။
၃။ ဗီတာမငျ A, B , C နဲ့ D
Vitamin A က ဆံသားအရှညျမွနျစဖေို့ အားဖွညျ့ပေးနိုငျပွီး
Vitamin B ကတော့ ဆံပငျကြှတျတာကို ကုသပေးနိုငျတဲ့ နရောမှာ အစှမျးထကျဆုံးပါပဲ။
Vitamin C ကတော့ ဆံပငျပကျြစီးမှုတှကေို ဟနျ့တားပေးနိုငျပွီး ဆံပငျသနျစှမျးစဖေို့ အရေးကွီးတဲ့ Collagen (ကျောလာဂငျြ) လို့လူသိမြားတဲ့ ပရိုတိနျးဓာတျကို ဖွညျ့တငျးပေးနိုငျပါတယျ။
Vitamin D ကတော့ နရေောငျခွညျနဲ့ ဆံသားတိုကျရိုကျထိတှရေ့မှာ ကွားခံအနနေဲ့ ဆံသားပကျြစီးမှုမရှိအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
Enzymes ကတော့ ဦးရပွေားကို သှေးလညျပတျမှုအားကောငျးစပွေီး ဆံပငျသနျစှမျးစဖေို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုငျတဲ့အပွငျ ဆံသားကွှပျဆတျခွငျးကိုလညျး ထိထိရောကျရောကျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
Amino acids ကတော့ ဆံပငျအရငျးကနေ အဖြားအထိ သနျစှမျးစဖေို့အတှကျ အကောငျးဆုံး အားဖွညျ့ပေးနိုငျပါတယျ။ ဆံပငျသနျစှမျးပွီဆိုမှဖွငျ့ ဆံသားနှဈခှဖွဈတဲ့ ပွဿနာတှနေဲ့လညျး ဝေးပွီပေါ့..
ဒီဓာတျတှသော စုံအောငျပါမယျဆိုရငျ ခွောကျသှပေ့ကျြစီးနတေဲ့ ဆံသားတှအေတှကျ ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့… ဆံသားပကျြစီးတဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ ဆံပငျကွမျးတမျးခွငျးတှေ၊ မှဲခွောကျခွငျးတှေ၊ ဆံသားကွှပျဆတျခွငျးတှနေဲ့ ဆံသားနှဈခှဖွဈခွငျးတှကေို ကာကှယျပေးနိုငျပွီလေ။
ဟုတျပွီ… ဓာတျတှကေိုတော့ သိပွီ။ ဒီဓာတျတှေ အကုနျပါတဲ့ ဆီကို ဘယျနားက သှားရှာရမလဲလို့လညျး ခေါငျးခဲမနပေါနဲ့။ ယောငျးတို့စဉျးစားနတေဲ့ မေးခှနျးအတှကျ မငျမငျ့မှာ အဖွရှေိပါတယျ။ ဒီအဖွကေတော့ Green Tea Oil ပါ။ ယောငျးတို့ ဆံကသော ကနျြးမာသနျစှမျးဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံး ဖွဈတဲ့ Green Tea အဆီကိုရော ဘယျက ရနိုငျမှာလဲ၊ ဘယျလို သုံးရမှာလဲ?
လှယျလှယျလေးပါ။ Silk-n Shine က ထုတျလုပျထားတဲ့ No More Damage HairCoat ဟာ Green Tea ရဲ့ အဆီအနှဈတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတာမို့ ယောငျးတို့ရဲ့ ပကျြစီးနတေဲ့ ဆံကသောအတှကျ အကောငျးဆုံး အဖွဖွေဈမှာပါ။ နစေ့ဉျသုံးလို့ရတဲ့ HairCoat လညျး ဖွဈတာမို့ ထှထှေထေူးထူးလညျး အလုပျရှုပျနစေရာ မလိုတော့ဘူးလေ…
ဒီ့ထကျပိုပွီး ယောငျးတို့ရဲ့ ခွောကျသှပေ့ကျြစီးနတေဲ့ဆံသားတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ အဖွရှောခငျြတယျဆိုရငျလညျး မငျမငျတို့ For Her Myanmar က ကငျြးပမယျ့ Her Beauty Her Choice ဆိုတဲ့ပှဲရဲ့ “Right Haircare For Your Hair” ဆိုတဲ့ Panel Discussion မှာ လာလလေ့ာလို့ ရပါသေးတယျ ယောငျးတို့ရေ…
ကဲ.. ဒီတော့ ဆံသားခွောကျသှပေ့ကျြစီးမှုအတှကျ အကောငျးဆုံးဆီကို မှနျမှနျကနျကနျ ရှေးခယျြပွီး ဆံသားကို ပကျြစီးမှုတှကေနေ ဝေးဝေးပွေးနိုငျကွပါစနေျော..
Tags: damaged, dry, Event, green tea, hair, oil, Vitamin